Ngaba i-2018 yoThengiso loNyaka ifile? Nantsi indlela yokuGcina | Martech Zone
Abantwana kunye neentliziyo entliziyweni bebe lusizi ngokulinganayo ukuwa kweToys 'R' kuthi, ishishini elomeleleyo kunye nomtya wokugqibela oshiyekileyo ojolise ikakhulu kwimidlalo. Isibhengezo sokuvalwa kwevenkile sisuse lonke ithemba lokuba ivenkile enkulu yokuthengisa- indawo yolangazelelo lwabazali, ubukumkani bemimangaliso yabantwana- inokugcinwa.
Eyona nto ibuhlungu kukuba iToys 'R' kuthi nge usindisiwe.
Ivenkile enkulu enezinto zokudlala yahlaselwa liqela lemingxunya yokuthengisa, kwaye ayisiyiyo yodwa. UCushman kunye neWakefield baqikelela ukuba i-US Ukuvalwa kwevenkile kuya kunyuka ngama-33% ngo-2018, ukuphelisa ngaphezulu kwama-12,000 amaziko
Phakathi kokusweleka kweRadioShack, ukwehla kweJCPenney kunye nokunyanzeliswa kwabanye abaninzi, abathengi bayagula ivenkile ukuvalwa! imiqondiso kunye nezihloko. NgeeSears, iClaire's kunye neLocker Locker zikulungele ukuphalaza ezinye iindawo, izinto azijongeka zilungile kubathengisi bezitena nodaka.
Ngokunikwa yile meko, kunokuba sisihende ukuba ucinge umculo ongasemva kaDon McLean, ngalo lonke elixesha ucula, 2018 ngu unyaka oswelekileyo wokuthengisa! Kodwa musa ukukhala ialam ngoku. Kukho ithemba kubathengisi abakulungeleyo ukuziqhelanisa nokwamkela utshintsho oluninzi oluye lwavela kumava abathengi okuthenga.
Ukusinda kwezona zinamandla
Abathengisi abaninzi bayasokola ukoyisa Isiphumo seAmazon (phakathi kwezinye izinto), kodwa lixesha lokuba itshintshe. Ngelixa i-dot-com enkulu ibonakalisile ukuba ingoyena mntu uphikisayo kwiivenkile zesiko, akukho sizathu sokuba abathengisi bangakwazi ukuqonda amandla abo okwenyani.
Ukuze koyiswe ezinye zeyona miceli mngeni mikhulu kwicandelo lokuthengisa, izitena nodaka abadlali kufuneka bazilungiselele ukwandisa amathuba esitolo, ukuthengisa ngokufanelekileyo kunye nokukhuthaza iimpahla, ukugcwalisa umsantsa phakathi kwedijithali nangokwenyama, ethi ekugqibeleni inyuse inzuzo kwaye iphucule amava abo abathengi.
Isipaji ngokuchasene neMfuno
Le ngxaki yakudala ibethe kaninzi ukuthanda kweToys 'R' kuthi kunye neGunya lezemidlalo. Kwimeko kwinqaku: wakha wacinga ukuba kutheni uthenge kwiivenkile 'R' kuthi?
Abantu abadala baya khona ukuthenga izipho ("Imfuno"). Isipaji, nangona kunjalo, yidigri enye okanye nangaphezulu eyahluliweyo kwimvelaphi yeMfuno. Isipaji asinamnqweno wokungena evenkileni- ngumsebenzi.
Abathengi beGunya lezemidlalo bajongene nengxaki efanayo, kuba abathengi bahlala bethenga ukulungiselela ixesha lezemidlalo elitsha. Emva koko babona ukunyuka kwamaxabiso kwaye bakufumanisa kunzima ukuqhubeka.
Kukho imeko-enye apho abazali abanesithukuthezi bafuna ukubulala ixesha nabantwana babo. Ukungena kuyo nayiphi na ivenkile, iWallet ayinazicwangciso zithile zokwahlula imali. Abazali bathatha umngcipheko kunjalo, ngethemba lokuba banokungena baphume ngexabiso eliphantsi.
Iintsapho ezilindelekileyo azifani. Abazali abatsha ("iWallet") banemincili yokuthenga yonke into abayifunayo. Ukukhanya okutsha komntwana kunemida, nangona kunjalo, ungalindelanga ukuba umnqweno wokuqhekeka uhlale ixesha elide emva koku:
Kugqitywe uhlahlo-lwabiwo mali okwesihlandlo sesine
Umntwana wesibini uyeza
Abathengisi bahlala bephosa amathuba okudibanisa i-Wallet enganyangekiyo kunye neMfuno enomdla. Nangona kukho amaxesha apho kunokubonakala kulula ngakumbi (umz: iintsapho ezilindelekileyo), kunokwenzeka ukuzisa iWallet kunye neMfuno kufutshane ngoku:
Ukubonelela abathengi ngoluhlu olucacileyo nolufutshane lwazo zonke iimveliso ezikhoyo kwivenkile
Ukuchaza ukuba ziphi na ezo mveliso
Ukufaka izixhobo ezinokunceda abathengi bathenge ngendlela efanelekileyo, enjengeemephu okanye uluhlu lwezinto zokuthenga ezidijithali
Ukwenza ubeko lwevenkile ukuphucula Ivenkile evenkileni
Ukuphunyezwa kweenkqubo zokunxibelelana njengokuthenga kwi-Intanethi kwivenkile
Ekugqibeleni, xa umthengi engabotshiwe ziivenkile ezaphukileyo, akunakufane kwenzeke ukuba bazibekele amangomso izinto kwaye bathelekelele ukuthenga kwabo.
Utshintsho kwidijithali alunanto yakwenza namanyathelo angaphakathi. Kwakungakhathali ukuba umThengisi u-X ucinga ukuba licebo elilungileyo- abathengi ndicinge ukuba licebo elihle elo! Bakhuthaza utshintsho lwangaphandle, lwenkcubeko.
Zombini iithoyi 'R' kuthi kunye neGunya lezemidlalo banikwe ithuba lokwamkela inguqu yedijithali kwaye badityaniswa ngakumbi noluntu lwabo lokuthenga. Ekugqibeleni basilele, kodwa iziphumo ngezahluke kakhulu.
Icandelo lezemidlalo: Njengomzali bendifuna ukutyelela iwebhusayithi yenkampani, ndibhengeze imidlalo yomntwana wam, iligi kunye neqela, kwaye ndifumane icornucopia yezindululo zezinto ezikhoyo.
Amathoyizi 'R' kuthi: Ngoku nali ithuba lokudala iapp apho abantwana banokukhangela kuyo yonke into yokudlala, benze uluhlu lweminqweno, emva koko bayinike uMama noTata ukuze bacoce kunye nokwabelana (nge-imeyile, imidiya yoluntu, njl.). Isenokubonelela ngesisombululo esilula-kodwa esiqaqambileyo-sokuthenga ngeentsuku zokuzalwa, iiholide kunye nezinye izihlandlo ezikhethekileyo.
Iziseko zokutya / ezinye iiVenkile zeOfisi: Khawufane ucinge uluhlu lwezinto ezifanelekileyo zesikolo ezivelisa ngokuzenzekelayo emva kokubhengeza uluhlu lomntwana kunye noluhlu lweklasi. Ngokuthathwa evenkileni, oku kungabaluleka kubazali abaxakekileyo.
Abathengisi abaliqela basilele ekuboneni ukubaluleka kwevenkile, kodwa kunjalo yonke into kubathengi. Xa iivenkile zindala, zinganxitywanga, zakhiwe ngendlela engalunganga, kunzima ukuhamba kuzo kwaye zinabasebenzi abambalwa kakhulu, abathengi baya kuya kwenye indawo, njengoko besakhangela amava awodwa okuthenga kodwa angenamthungo - kulapho umthengisi wemveli unako ndihlangule.
Ukugcina iingcango zabo zivulekile, abathengisi kufuneka baphinde bacinge ngohlobo lokuqala lwesitena nodaka. Ngokwandisa amathuba kwivenkile, ukuba ne-wallet yabo kunye neemfuno, ukuqonda abathengi babo, kunye nokunciphisa umsantsa phakathi kwedijithali kunye nomzimba, abathengisi abayi kuba naxhala malunga ne-e-commerce giants, okanye ukuvala iingcango zabo- kuba baya kuba benyuse inzuzo kwaye baphucule. amava abathengi.
tags: SikaClaireICushman kunye neWakefieldukwamkelwa kwedijithaliutshintsho lwe digitalLockerjc ipeniifumanisekwiivenkileiivenkile ezibonelela ngeofisiItyotyombe likanomathotholoIvenkileukuthengisa izinto ezintshaiivenkile ezithengisa izinto zempahlaiibhereezemidlalo igunyaizicwangcisoizinto zokudlala r us